Dowladda oo dooneysa in ay qorato boqolaal shaqaale cusub ah – The Voice of Northeastern Kenya
Dowladda oo dooneysa in ay qorato boqolaal shaqaale cusub ah
starfmke August 18, 2016
Xadiga lacagaha mushaaraadka ah eek u baxa shaqaalaha dowladda ayaa lagu wadaa in uu si weyn kor ugu kaco, kadib markii ay dowladda shaaca ka qaaday in ay qorsheyneyso qoritaanka boqolaal howl wadeenno ah oo cusub.
In ka badan 600 oo saraakiil sar sare ah ayaa la filayaa in ay xukuumadda u qorato shaqooyin kala duwan oo la xiriira xafiisyada wasaaradaha kala duwan ee dalka.
Shaqaalaha cusub ee laga howl galinayo waaxyada xukuumadda oo tiro ahaan gaaraya 604 qof ayaa si saameyn leh u kordhin doona tirade dadka ka shaqeeya xarumaha guud ee dowladda.
Xayeysiin ku aadan boosaska shaqo ee dadka khibradooda leh loo raadinayo ayaa lagu xusay in qofka ugu mushaarka yar dadkaasi la qorayo uu qaadan doono ku dhawaad 90,000 oo shilinka dalka ah, halka qofka ugu mushaarka bandanna uu qaadan doono lacag ka badan 300,000 oo shilin.
Waxaa intaas dheer in sidoo kale dhawaan la qori doono 7,000 oo macalimiin hor leh ah, kuwaasoo iyagana ku biiri doona Schoollada hoose/dhexe iyo kuwa sare ee ay dowladda mnaamusho.
Macalimiintaan ayaa qeyb ka noqonaya bareyaal cusub oo la qorsheynayo in lagu kordhiyo kuwa hadda shaqeeya, maadaama ay mudooyinkaan soo badaneysay cabashada ku aadan macalimiin yaraan, taasoo lagu sheegay in loo baahanyahay 85,000 oo macalin oo cusub.
← Marwada 1-aad ee dalka oo rugta caafimaad ee 46-aad ka hirgalisay countiga Muranga
Countiyada dalka oo la sheegay in ay khandaraasyada ku bixiyaan qab ay ku dheehan tahay laaluush iyo eexitaan →